Axmed Madoobe: Doorashada Jubbaland Waxey Ku Qabsoomi Doontaa Waqtigeeda – Kalfadhi
Axmed Madoobe: Doorashada Jubbaland Waxey Ku Qabsoomi Doontaa Waqtigeeda
Madaxweyanaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) ayaa si rasmi ah u shaaciyay in uusan sameyn doonin muddo kororsi, doorashada madaxtinimadana lagu qaban doono waqtigii loogu talo gelay,sida uu Kalfadhi u sheegay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in doorashada madaxtinimada Jubbaland la qaban doono 15 bisha Agoosto ee sanadka 2019-ka.
Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jubbalad Maxamed Axmed Sabriye oo warbaahinta Kalfadhi la hadlay ayaa sido kale sheegay in dhawaan la magacaabayo guddiga doorashada ee maamulka Jubbaland.
Sharciga doorashooyinka oo ay soo diyaarisay wasaaradda dastuurka ee maamulka Jubbaland ayaa la hor keeni doonaa baarlamaanka maamulkasi si ay xildhibaannada u ansixiyaan.
Dowladda federaalka Soomaaliya dalalka deriska iyo beesha caalamka ayaa dusha kala socda hannaanka loo marayo doorashooyinka dhawaan la filayo in ay ka dhawaan deegaanada ay maamulan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe.
HINDISE SHARCIYEEDKA HANTI DHAWRKA GUUD EE QARANKA OO UU GOLAHA SHACABKU MARINAYO MAANTA AQRISKIISA LABAAD
Xildhibaan Cabdixakiin: Madaxda Dowladdu Wey Ka Hooseeyaan Heer Kasta Oo Laga Filanayay